Nan meithal ap ulaw nan khua in kan chuak lai, tiah ralkap nih an leem hna – Hakha Cherry
Nan meithal ap ulaw nan khua in kan chuak lai, tiah ralkap nih an leem hna
Sagaing Ramthen Zinmarpin Peng Kapaing khua ah ralkap nih, “Nan meithal zuun 150 hrawng kan pe (ap) ulaw nan khua in kan chuak lai,” tiah khuami an leem hna.
“Drone in an thlak i meithal zuun 300 an hmuh. Cu chung ah zuun 150 in ap ding kha Phungki an chimh i an kan leem. Nain, kan ap lai lo. Aruang cu thawngzamh fianhnak (press conference) ah vawleipi theih in kanmah lei ah an tang/dir tiah lih bia an chim lai i an kedan tang in kan luat kho ti lai lo. Cucaah, ap lo ding in bia kan chah,” tiah meithal ngei khuami pakhat nihachim.
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ကပိုင်ကျေးရွာက ရွာသားတွေအနေနဲ့ တူမီးသေနတ် ၁၅၀ လောက် စစ်ကောင်စီကို အပ်မယ်ဆိုရင် ကျေးရွာကနေ ထွက်သွားမယ်ဆိုပြီး ဒီကနေ့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“သူတို့ ဒရုန်းနဲ့ ရိုက်ထားတာမှာ တူမီးသေနတ် ၃၀၀ လောက်ရှိတာ တွေ့ရလို့ ၁၅၀ လောက်အပ်ဖို့ ဆရာတော်ဆီကနေ တစ်ဆင့်ကမ်းလှမ်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မအပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ အပ်လိုက်လို့ရှိရင် သူတို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြည်သူတွေက သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းတယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကိုလိမ်ရင် သူတို့ဖိနပ်အောက်က လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး” လို့ ကပိုင်ရွာသားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ ကပိုင်ကျေးရွာအနီးမှာ တပ်စွဲထားတာ သုံးရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၅ဝ လောက်အတွင်းက အမျိုးသားတွေကို ရွာအတွင်း ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက် တိရစ္ဆာန်တွေကို အစာကျွေးဖို့လည်း ခက်ခဲနေပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်တွေ လှည့်ပတ်နေတဲ့အတွက် အဲဒီအနီးအနားရွာတွေဖြစ်တဲ့ ရင်ပေါင်တိုင်၊ ဆင်စွယ်၊ မောက်လုပ်၊ အထက်ငနန်း၊ အောက်ငနန်း အပါအဝင် ရွာအများစုက ဒေသခံတွေ ရှောင်ပြေးနေကြရတယ်လို့ ဒေသခံတွေထံက သိရပါတယ် The Hakha Times
Social media maw palh, kan lungput dah?